​छातिमा सजाइएकी जेनीलाई विष्णुले किन हाने एसिड ?
Thursday, 16 May, 2019 3:03 PM
२ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंमा बुधबार राति युवतीमाथि एसिड प्रहारको खबर एकैचोटी सबैतिर फैलियो । श्रीमानले नै श्रीमतीमाथि एसिड प्रहार गरेको केही बेरपछि खुल्न आयो । कालोपुलमा आमा र बहिनीसँग बस्दै आएकी जेनी खड्कामाथि श्रीमान् विष्णु भुजेलले एसिड हानेका थिए ।
महानगरीय प्रहरी परिसरले काठमाडौंले बिष्णुलाई राति घटनालगत्तै पक्राउ गरेको थियो । उनी प्रहरीकै हिरासतमा छन् । जेनी भने कीर्तिपुरस्थित ब्रन अस्पतालमा उपचाररत छिन् । उनको अवस्था खतरामुक्त रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
विष्णुको छात्तिमा जेनीको तस्बिर
विष्णु र जेनीको प्रेम कति गाढा थियो भन्ने पुष्टी विष्णुको छातीमा खोपिएको ट्याटुबाटै पुष्टी हुन्छ । उनको छातिमा जेनीको अनुहारको ट्याटु छ । केही दिनअघिसम्म दुवैले सँगै रहेका तस्बिर फेसबुकमा पोष्ट गरेका थिए। ती तस्बिरहरु एक अर्कालाई ट्याग भएका देखिन्छन् । तर, छात्तिमा सजाएकी जेनीलाई एसिड हानेर कुरुप बनाउने हर्कतसम्म किन पुगे विष्णु ?
जेनीको विश्वासमा विष्णुको बदमासी
जेनीको विश्वमासमा विष्णुले बदमासी गरेकै कारण सम्बन्धले खराब मोड लिएको देखिएको छ । बिष्णु काभ्रेका हुन्। उनी बनेपामा प्राविधिक श्रमिक हुन्। जेनी कालोपुलमा परिवारसँग बस्दै आएकी युवती हुन्।
दुईबीच चार वर्षअघि प्रेम भयो। जेनीले १० कक्षा पढ्दापढ्दै विष्णुसँग भागेर प्रेम विवाह गरिन् । विवाहपछि यी दुवै काभ्रे देउरालीस्थित घर गएनन् । बनेपामा डेरागरी बस्न थाले। विष्णु बनेपामै एउटा ग्यारेजमा काम गर्थे। उनीहरूबीच राम्रै सम्बन्ध चलिरहेको थियो। प्रेम प्रदर्शन गर्न विष्णुले छातीमा जेनीको तस्बिरसमेत कुँदे ।
विवाहको अर्को वर्ष उनीहरुबाट एक सन्तानको जन्म भयो। त्यसपछि बिष्णुले उनलाई आफ्नो पुर्खेयौली घर लिएर गए। बिष्णुको घरपुगेपछि मात्र जेनीले पतिको बदमासी थाहा पाइन् । आफू विष्णुको पहिलो प्रेमिका नभई दोस्री श्रीमती भएको थाहा पाएपछि उनको मन भड्कियो ।
यो घटनासँगै जेनीले सोच बदलिन्। बिष्णुलाई छोडिन्। कालोपुलमा आमा र बहिनीसँग बस्न थालिन्। त्यसपछि बिष्णुले कहिले फकाउँथे, कहिले धम्क्याउँथे। धोका पाएको अनुभव गरेकी जेनीको मन फर्किएन। अनुसन्धान गरिरहेका डिएसपी होविन्द्र बोगटी भन्छन्, ‘बुधबार पनि बिष्णु र जेनीबीचमा पटक–पटक टेलिफोनमा कुरा भएको देखिन्छ । कुराकानीपछि उनी भेट्न तयार भएकी देखिन्छ ।’
बिष्णु बनेपाबाट जेनीलाई भेट्न काठमाडौं आए। उनी सरासर कालोपुल गए। जेनीलाई घर बाहिर एकान्तमा लगे। आफ्नै श्रीमानले यति ठूलो घटना गराउलान भन्ने युवतीले कल्पनासम्म गरेकी थिइनन् । विष्णु बनेपाबाटै एसिड बोकेर आएको खुलेको छ । दुवै जना एकान्तमा पुगेपछि विष्णुले जेनीलाई एसिड प्रहार गरेका थिए।
एसिडले शरीर जल्न थालेपछि जेनी हार गुहारगर्दै चिच्याउन थालिन्। उनलाई स्थानीयहरुले तत्कालै नजिकैको ओम अस्पताल पुर्याएका थिए। त्यसपछि कीर्तिपुर अस्पताल लगिएको थियो ।
श्रीमतीलाई एसिड प्रहार गरेपछि बिष्णु भने भागेर काडाँघारी पुगेका थिए। घाइते जेनीको बयानपछि उनको खोजीमा जुटेको काठमाडौं प्रहरीले काँडाघारीमा रहेको एउटा रेष्टुराँमा मादक पर्दाथ सेवन गरिरहेको अवस्थामा विष्णुलाइ पक्राउ गरेको थियो ।
सुन पसलबाट ल्याएका थिए एसिड
विष्णुले काभ्रेको एक सुन पसलबाट एसिड मागेर ल्याएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । ‘पसलेको मोटरसाइकल बनाइदिने गर्दोरहेछ । त्यही चिनजानको भरमा एसिड ल्याएको रहेछ’, बोगटीले भने, ‘पसलेलाई उसले खुट्टाको खिल निकाल्ने भनेर एसिड मागेको रहेछ ।’
तेजाब आक्रमण र ज्यान मुद्दा चलाउने तयारी
महानगरीय प्रहरी वृत्त, कमलपोखरीले उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेर बयान लिइरहेको छ । गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराधसंहिता अनुसार तेजाब आक्रमण गरेको अभियोग प्रमाणित भए ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैदी वा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ । भुजेलको हकमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा पनि चल्न सक्नेछ ।